In Uu Aduunka Ugu Fiicnaado Iska Daaye, Premier league Ayay Laba Xidig Uga Fiican Yihiin-Robbie Fowler Oo U Jawaabay Gareth Southgate Ee Amaantii Harry Kane. - GOOL24.NET
In Uu Aduunka Ugu Fiicnaado Iska Daaye, Premier league Ayay Laba Xidig Uga Fiican Yihiin-Robbie Fowler Oo U Jawaabay Gareth Southgate Ee Amaantii Harry Kane.
tabababaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate ayaa kadib guushii cajiibka ahayd ee xulkiisu ka gaadhay Croatia waxa uu saxaafada ka hor sheegay in Harry Kane uu yahay gool dhaliyaha aduunka ugu fiican waxayna taasi dhalisay dood taas oo uu ku soo biiray halyaygii Liverpool ee Robbie Fowler.
Robbie Fowler ayaa sheegay in Harry Kane aanu aduunka ugu fiicnayn balse xataa ay jiraan laba gool dhaliye oo Premier league kaga fiican. Robbie Fowler ayaa tilmaamay in xataa Harry Kane aanu ugu fiicnayn gool dhaliyaasha Premier league taas oo uu meesha kaga saaray hadalkii Southgate in uu Kane yahay gool dhaliyaha aduunka ugu fiican.
Robbie Fowler oo ka jawaabaya hadalkii Southgate uu ku sheegay in Harry Kane uu yahay gool dhaliyaha aduunka ugu fiican ayaa yidhi: “Anigu waan ogahay sababta uu Gareth u sheegay, xaqiiqdii waa sababta in uu kulanka ugu guulaystay oo kaliya. Waxa uu sheegay in uu hogaamiye fiican yahay, in qolka labiska uu ku fiican yahay isla markaana ay wiilashu isaga jecel yihiin”.
Robbie Fowler oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Laakiin marka ay noqoto gool dhaliyaha heerka ugu saraysa, taas wax shaki ahi kama joogo. Laakiin ahaanshaha gool dhaliyaha ugu fiican waxaan filayaa in ay jiraan dhawr ciyaartoy oo heer sare ah oo halakas jooga oo isaga ka yara fiican. Isagu ma aha ka aduunka ugu fiican”.
Robbie Fowler ayaa ku dooday in Harry Kane aanu xataa ugu fiicnayn horyaalka Premier league iska daa aduunka oo wuxuuna yidhi: “Haddii aan daacad ahaado, anigu xataa ma filayo in isagu uu Premier league ugu fiican yahay”.
Laakiin Robbie Fowler ayaa tilmaamay xidigaha ka fiican Harry Kane ee horyaalka Premier league ka ciyaara wuxuuna yidhi: “Waxaan filayaa in Aguero uu yahay dhamaystire cajiib ah, xaqiiqdiina waxaa dhamaystire layaableh ah Salah laakiin waan ogahay sababtii uu Gareth u sheegay”.
Robbie Fowler ayaa aaminsan in Sergio Aguero iyo Mohamed Salah yihiin labada xidig ee premier league ka ciyaara ee Harry Kane ka fiican wuxuuna ku dooday in hadalkii Southgate uu ahaa farxad ka timdi goolkii uu Kane uu guusha ugu horseeday xulkiisa Three Lions ee dhamaadkii kulankii Croatia.